Funda .. Malunga nexesha naManzi, nguAndri Snaer Magnason
Ngexesha naManzi, nguAndri Snaer Magnason
Ukuba kunyanzelekile ukuba ujongane nenye indlela yokuhlala kulo mhlaba, akukho mathandabuzo. Ukuhamba kwethu kwihlabathi liphawulwe ngeempawu zomhlaba njengophawu njengoko zingabalulekanga ukuba sijonga ukulingana kwexesha lethu kunye nomhlaba.
Ke ayibalulekanga kwaye inako ukutshintsha yonke into. Umhlaba uya kusinda kuthi kwaye siya kuba luhlobo olulodwa kwindalo iphela ethe-ethe ekuzitshabalaliseni. Asifuni meteorites okanye ice ice, ngenkululeko encinci yokuzikhethela, ilizwe elitsha lilungile.
Sibaninzi kwaye sifaniswe kakubi. Umakhelwane ogcwele ingqumbo, onwabile ukulahla inkunkuma kubamelwane abaphantsi, bengakwazi ukuqonda nantoni na ngentsingiselo yokulungileyo ...
Sineencwadi ezininzi ngentlekele ezayo. Imizekelo efana «Imizila yeenyawo: Ukukhangela umhlaba siza kushiya ngasemva» okanye «Indlela esiphila ngayo»Ukubalula isibini kubo. Ngaphandle kokubeka mnyama kumhlophe siyakwazi ukuqaphela nantoni na engaphaya kokugcina iesile lethu okanye ukwenza ishishini nkqu neapocalypse. Yeyona mpucuko ilusizi emazantsi eMilky Way ... Kungomso nje.
Malunga nexesha kunye namanzi Isincoko esibalisayo esinzulu nesinyanzelisayo kwintlekele yokusingqongileyo kwaye, kwangaxeshanye, sisibongozo esisondeleyo nesilangazelelayo kwihlabathi. Wazalelwa kwincoko kunye nososayensi ophambili oqinisekileyo ukuba ngababhali, kwaye hayi inzululwazi, abakulungeleyo ukuxoxa ngomnye wemicimbi ecinezelayo eluntwini.
Iimpikiswano azisebenzisayo, ke, ziintsomi okanye inzululwazi, ziyimbali okanye ziziphethe kakuhle. Isiphumo sothungelwano olutyebileyo lwamabali okuhamba, amabali osapho, amaxesha okubonisa: incwadi entle, kunye nokungxamiseka.
Ngoku ungathenga incwadi «Ngexesha nasemanzini», ngo UAndri Snaer Magnason, Apha:
Iilebula UAndri Snaer Magnason, Iincwadi zesayensi, Iincwadi ezisisincoko